Tanànan'ny Plattsburgh mandrara ny fitrandrahana Bitcoin ary Cryptocurrency hafa | Vaovao momba ny gadget
Toa mbola tsy nifarana ilay tazo cryptocurrency. Satria maro ny mpampiasa no manohy mitrandraka Bitcoin sy vola nomerika hafa. Zavatra miteraka olana sy resabe amin'ny tranga maro. Toy ny nitranga tao an-tanànan'i Plattsburgh ao amin'ny fanjakan'i New York. Hatramin'ny naha-tanàna voalohany ny fandrarana ny fitrandrahana cryptocurrency.
Nisy ny fifidianana natao tao amin'ny filankevitry ny tanàna. Tamin'ny latsa-bato voalaza, niray feo dia Voarara ny fitrandrahana cryptocurrency mandritra ny 18 volana manaraka. Ny iray amin'ireo antony nanapahana hevitra dia ny fanjifana angovo goavambe entin'ity fizotrany ity.
Raha ny tenin'ny ben'ny tanàna tenany, Colin Read, ny tanàna dia manana ny taha ambany indrindra amin'ny herinaratra eto an-tany. Zavatra iray izay nanosika ny mpitrandraka Bitcoin sy ny vola hafa hampiasa ny tanàna ho ivon-toeram-pitrandrahana. Hatramin'ny lasa ambany dia ambany ny vidin'ny herinaratra.
Amin'ny tranga Plattsburgh, eo amin'ny 4.5 cents isaky ny kilowatt-hour no aloa. Ny salanisa any Etazonia dia manodidina ny 10 cents. Koa latsaky ny antsasaky ny. Ho fanampin'izany, manana tanàna ny vidiny manokana ho an'ireo orinasa mampiasa herinaratra. Amin'ireto tranga ireto dia 2 cents no voampanga. Zavatra tadiavin'ny mpitrandraka Bitcoin hanararaotra azy.
Raha ny marina, Coinmint dia orinasa natokana ho an'ny fitrandrahana Bitcoin ary nanorim-ponenana tao an-tanànan'i Plattsburgh. Eo anelanelan'ny volana Janoary sy Febroary dia manana ilay orinasa 10% amin'ny angovo eto an-tanàna lany. Santionany amin'ny habetsaky ny angovo lanin'ity fizotrany ity. Noho io antony io dia nandray andraikitra ny filankevitry ny tanàna taorian'ny nitarainan'ny mponina ny fiakaran'ny vidim-bola.
Hatramin'ny nanomezana ny fanjifana fitrandrahana Bitcoin, ny tanàna dia tsy maintsy nividy herinaratra teny amin'ny tsena malalaka, izay lafo kokoa. Zavatra iray izay niteraka faktiora lafo kokoa ho an'ireo mponina ao an-tanàna. Noho izany dia manapa-kevitra izy ireo ary mijanona ny fitrandrahana Bitcoin sy ny crypto hafa voarara mandritra ny 18 volana manaraka.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » teknolojia » Cryptocurrencies » Plattsburgh dia lasa tanàna voalohany mandràra ny fitrandrahana Bitcoin
Ny General Electric Aviation dia nahomby tamin'ny fanandramana izay ho maotera lehibe indrindra manerantany
MIT mino fa mety ho vonona ao anatin'ny 15 taona fotsiny ny fusion nokleary